Rayong HGH Thailand - macaamiisha dib u eegis
Dib u eegista macaamiisha ee Rayong
By HGH Thailand Waxaa laga yaabaa 16, 2017
- Helitaanka hormar koritaanka hormoon Ansomone macaamiisha
- Dalbo lacag bixinta
- Hormoonka hormoonka korriinka ee Thailand oo la socota lambarka raadraaca
- EMS soo gudbinta Thailand ee kuyaal maalmaha ganacsiga 2-3
- Gaadiidka La Helay
Ugu horeyntii waxaan ka gaabsaday inaan iibsado HGH online. Waxaan soo gaadhay shirkadda, waxaana si aad ah ugu riyaaqay adeegga macaamiishooda. Waxay ka jawaabayeen dhammaan su'aalahayga ku saabsan qiyaasta iyo wax ka qabashada walaacadayda. Marka aan amarro Ansomone, waxay ii sharxeen ciwaanka maraakiibta. Waxay iigu soo direen lambarka raadraaca iyo sawirka dib u soo celinta .... Xirfadle ah. Waxaan si weyn ugu talinayaa shirkaddan iyo badeecadahooda, waxaanan sii wadaa inay noqoto macaamiil macquul ah.
Shannon Waxaa laga yaabaa 16, 2017